China adjustable dumbbell weight bench စက်ရုံနှင့် ပေးသွင်းသူများ |Yunlingyu
ချိန်ညှိနိုင်သော dumbbell အလေးချိန်ခုံတန်းလျား
ဂီယာအနေအထား : 90 ဒီဂရီ ထောင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား: 1280*510*255 မီလီမီတာ
1. ကြွက်သားတွေ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး ဘားဘဲလ်က လေးလံနေတဲ့အခါ၊ သင့်ပခုံးနဲ့ လက်တွေကို မရုတ်သိမ်းခင် barbell ကို ထိန်းချုပ်ထားဖို့ သေချာပါစေ။ဘားဘဲလ်ကို ခေါင်းအထက်ကနေ မေးစေ့အထက်အထိ မြှောက်ထားတဲ့အခါ အလွန်အကျွံ တွန်းအားကို ရှောင်ပါ။မေးစေ့အထက်တည့်တည့်မှာ အလွန်များပါတယ်။လက်မောင်းသည် ထောင့်တစ်ခုတွင်ရှိပြီး barbell ကို ထိထိရောက်ရောက် မထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ အကာအကွယ်မရှိပါက မတော်တဆမှုဖြစ်စေရန် barbell ကို ရှေ့သို့ချရန် လွယ်ကူသည်။
2. အတင်းလက်လှမ်းမမီသော barbell ကို တွန်းပါ၊ ခါးနှင့် နောက်ကျောသည် ထောက်ရန် အလွန်ခက်ခဲသည်၊ ကြွက်သားများ ညောင်းခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်၊
1.အလေးချိန်ခုံတန်းလျား၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းသည်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခိုင်ခံ့ပြီးတည်ငြိမ်မှုရှိရန်သေချာရပါမည်။အချို့ခုံတန်းလျားများသည် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသော်လည်း အသုံးပြုရန် အလွန်တုန်လှုပ်နေပါသည်။
2. သက်တောင့်သက်သာရှိသော ထိုင်ခုံအမြင့်သည် သင့်လျော်မှုရှိရန်၊ ခုံတန်းနှိပ်ခြင်း၊ မြင့်လွန်းသည်ဟု မခံစားရစေရန်၊ နလပိန်းတုံးများ လှော်ခတ်ခြင်း၊ နိမ့်လွန်းသည်ဟု မခံစားရဘဲ ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောရလျှင် အမြင့် 50 စင်တီမီတာခန့် သင့်လျော်ပြီး ထိုင်ခုံမျက်နှာပြင်သည် ရှည်နေရပါမည်။ မဟုတ်ရင် ခါးအောက် မှာ ကပ်ထားရ တာ အရမ်း အဆင်မပြေဘူး .
3. လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို လိုက်မလုပ်ပါနှင့်၊ သို့သော် ချိန်ညှိနိုင်သော ခုံတန်းရှည်ကို ဝယ်ယူရန် အကြံပြုလိုပါသည်၊ နောက်ကျောကို ဒေါင်လိုက်ထောင့်နှင့် နီးကပ်စွာ 30 ဒီဂရီ ချိန်ညှိနိုင်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် သင်သည် ကုန်းတက်ခုံတန်းတွန်းနှင့် နလပိန်းတုံးကို သယ်ဆောင်နိုင်စေရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ တွန်းအား၊ ထိုင်ခုံအပိုင်းကိုလည်း အာရုံစိုက် ချိန်ညှိနိုင်သည်၊ ကုန်းတက် တွန်းသည်၊ အပေါ်သို့ စောင်းနေရန် လိုသည်၊ သို့မဟုတ်ပါက ဆက်၍ လျှောကျနေလိမ့်မည်။
ထုတ်ကုန်အမည် ချိန်ညှိနိုင်သော dumbbell အလေးချိန်ခုံတန်းလျား
ပစ္စည်း သံမဏိ/သံနှင့် PU ဖျာ
ကိုယ်အလေးချိန် အသားတင်အလေးချိန်: 38kg
ဂေါ့အလေးချိန်: 40 ကီလိုဂရမ်
အရောင် အနက်ရောင် သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
အခြား 300 ကီလိုဂရမ်သယ်ဆောင်သည်။
90 degree Angle ချိန်ညှိနိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား: 1280*510*255 mm
အထုပ်အရွယ်အစား 1500*600*1400 မီလီမီတာ
ယခင်- Deluxe ဘက်စုံသုံးအလေးချိန်ခုံတန်းလျား
နောက်တစ်ခု: Bicep လေ့ကျင့်ရေးဘုတ်အဖွဲ့